Cholesterol 20 okufanele ukwenze > Ukuhlaziya
Izinhlobo zama-cholesterol abazi ezindaweni zokucwaninga! Ithebula: i-cholesterol
Ake siqale ngokwazi. I-cholesterol yinto e-organic, i-alcohol yemvelo enganyibiliki. Emzimbeni wazo zonke izidalwa eziphilayo, iyingxenye yodonga lweseli, yakha ukwakheka kwayo futhi ibambe iqhaza ekuthuthweni kwezinto zingene esitokisini nangokuphambene nalokho.
I-cholesterol ephakeme egazini ingabangelwa yizizathu eziningi futhi iholele ekulimaleni kwemithambo yegazi kanye ne-atherosulinosis. Kepha, ngaphandle kwalokhu, umzimba uyakudinga:
ukuthutha kwezinto ezithile ngokusebenzisa izindlela ezikhethekile kuwo,
ukugaya okujwayelekile, ukubamba iqhaza ekwakhekeni kwama-bile acid,
ama-hormone ocansi, okuyingxenye kuwo.
Izinhlobonhlobo namazinga wokuqukethwe
I-cholesterol ijikelezwa njalo emzimbeni ngegazi, ukusuka kumaseli nezicubu kuya esibindini ukuze kuthiwe. Noma, ngakolunye uhlangothi, i-cholesterol ehlanganiswe esibindini idluliselwa kwezicubu. EzokuThutha zenziwa njengengxenye yama-lipoprotein - amakhompiyutha namaprotheni. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlobo eziningana zalezi zingxubevange:
I-LDL - ama-lipoproteins aphansi enzelwe ukuthutha i-cholesterol esuka esibindini ayiyisa izicubu,
IVLDLP - lipoprotein ephansi kakhulu ethwala i-cholesterol engapheli, ama-triglycerides emzimbeni,
I-HDL - lipoprotein ephezulu kwabantu, ihambisa i-cholesterol eyeqile kusuka ezicutshini iye esibindini ukuze icutshungulwe.
Ukusuka kokungenhla, kuyacaca ukuthi uma okuqukethwe okuphezulu kwe-HDL, mancane amathuba okuthola i-atherosclerosis. Uma inani lamanye amakhompiyutha egazini likhuphuka, lokhu kuyisibonakaliso esibi sokugcina. Kungenzeka kakhulu, imikhumbi isivele ithintekile yi-atherossteosis. Okuqukethwe yi-triglycerides nakho kubalulekile. Izinga labo eliphakeme nalo alilwamukeleki odongeni lwe-vascular, futhi libonisa ukubhujiswa okwandayo kwezixakaxaka zeVLDL ngokukhululwa kwe-cholesterol
Ngubani okhonjiswa ukuhlaziywa nokuthi kunikela kanjani
Ukuhlolwa kwegazi kwe-cholesterol ephelele kuyingxenye yokuhlaziywa kwamakhemikhali.
Igazi lithathwa emthanjeni. Ukuhlaziywa kunikezwa ekuseni ngesisu esingenalutho. Kuyadingeka ukukhipha ukusetshenziswa kokudla okunamafutha, utshwala kusasele usuku. Kunconywa futhi nokugwema ukubhema.
Ukuchazwa kwe-cholesterol kuboniswa ezigulini ezilandelayo:
Abantu abasengozini ngefa
Lapho ufinyelela iminyaka ethile,
Ukuhlushwa isifo sikashukela ne-hypothyroidism,
Abesifazane abathatha inzalo yokuvimbela inzalo isikhathi eside,
Amadoda angaphezu kweminyaka engama-35
Ebusweni bezimpawu ze-systemic atherossteosis.
Kunezimbangela ezahlukahlukene ezifaka isandla ku-hypercholesterolemia. Lokhu kufaka phakathi:
Isandulela sofuzo - ukucatshangelwa kwangaphambili kokuhlanganiswa kwe-cholesterol engazinzile nge-HDL,
Ukukhuluphala - kubantu abakhuluphele, inani elikhulu le-cholesterol lifakwa kwizicubu ezinamafutha,
Ukudla okungenamsoco - ukusetshenziswa ngokweqile kokudla okuqukethe amafutha ezilwane, inani eliphansi le-fiber namavithamini,
Indlela yokuphila yokwehlisa ukuthula
Izifo ezingamahlalakhona, ezifana nesifo sikashukela noma i-hypothyroidism,
Ukubhema - kunomthelela ekwandeni kwe-LDL ne-VLDL, kanye ne-spasm yemithambo yegazi, ngaleyo ndlela kuthuthukiswa ukuthuthukiswa kwe-atherosclerosis,
Ukucindezela - kuholela ekubulalekelweni kwemithambo futhi kukhulisa hypercholesterolemia.
I-Hypercholesterolemia esigabeni sokuqala ayizivezi. Okulandelayo, izimpawu zesifo esikhulayo zijoyina:
Ubuhlungu obucindezelayo, obucindezela ngemuva ngemuva kwesiqu nge-angina pectoris noma ukuphefumula okushisayo,
Ubuhlungu obukhulu bokusika esifubeni nge-myocardial infaration,
Isiyezi, isicanucanu, umbono kanye nememori - izimpawu zezilonda ze-atherosulinotic zemithambo yengqondo,
Ukungazi kahle, i-paresis noma ukukhubazeka kwamaphethelo ngesifo sohlangothi,
Intrittent claudication - Ubuhlungu emikhawulweni ephansi ngomonakalo wemikhumbi yabo,
Amabala aphuzi esikhunjeni yi-xanthomas, okuyizinto ezibucayi ze-cholesterol.
Kungakho kudingekile ukulawula okuqukethwe i-cholesterol kubantu abasengozini yezifo zenhliziyo nezemithambo ngefa noma indlela yokuphila.
Ungaphila kanjani ngokuqhubekayo
Ukwehlisa i-cholesterol ezingeni elifunekayo, ukuvimbela ukuthuthukiswa kwe-atherosulinosis e-systemic, ukudla, ukuguqulwa kwendlela yokuphila kuzosiza.
Nge-atherossteosis ekhona, kukhonjiswa umuthi, futhi okunye ukwelashwa ngeke kube ngaphezulu.
Ukudla akudlali indima ebaluleke kakhulu, ngoba ngama-20% kuphela cholesterol angena emzimbeni ngokudla, kodwa kuyinto efanelekile. Futhi, eminye imikhiqizo isiza ukususa okungaphezulu kwayo.
Kufanele kube yini ukudla kwe-hypercholesterolemia? Okokuqala, sibala ukudla okufanele kukhawulelwe noma kungafakwa ekudleni kwansuku zonke. Lokhu kufaka phakathi:
Okuhlangene (ubuchopho benkomo - umnikazi werekhodi we-cholesterol).
Ukuze ukwazi ukuthola okuqukethwe kwe-cholesterol ekudleni okuyisisekelo, sincoma ukusebenzisa itafula.
Manje cabanga ngemikhiqizo engadliwa futhi okufanele idliwe ngokwanda kwe-cholesterol yegazi kanye ne-atherossteosis. Kunconywa ukufaka phakathi ekudleni kwakho:
I-legumes (ubhontshisi, uphizi, ama-soya) - ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-fiber ne-pectin,
Amakhambi amasha (isipinashi, iparsley, u-anyanisi oluhlaza kanye nezimpaphe zikagalikhi), anomphumela we-anti-atherogenic,
I-Garlic - inikeza ukuncipha kwe-cholesterol yegazi,
Imifino ebomvu nezithelo (pepper, beet, cherries),
Amafutha omifino (umnqumo, i-sunflower),
Ukudla kwakho kwansuku zonke kufanele kube nokulinganisela, kuqukethe wonke amavithamini adingekayo nezakhi zomzimba. Kungcono ukudla ngokwamaqhezu, ezingxenyeni ezincane. Gwema ukudla ukudla okungenamsoco ngesikhathi sokulala.
Ukwenza kwansuku zonke nendlela yokuphila
Ingxenye ebalulekile yokwelashwa okuphumelelayo, ngaphezu kokudla, ukugcinwa kwemithetho ethile:
Ukuphumula okugcwele nokulala, okungenani amahora angu-8,
Ukuthuthukiswa komzimba wokulala, ukuphumula nokudla,
Isigaba sokuyeka ukubhema nokusebenzisa kabi utshwala,
Vikela ingcindezi kanye nokukhula kwengcindezi yengqondo
Ukulwa nendlela yokuhlala (imizuzu yokuqeqeshwa ngokomzimba, ukwenqaba ukuthuthwa uma kungenzeka uhambe ngezinyawo, ukugijima kalula),
Ukulwa nokwelashwa ngokweqile kanye nokwelashwa okwanele kwezifo ezingamahlalakhona.
Izindlela ze-Folk zisuselwa ekusetshenzisweni kwezitshalo, imifino nezithelo ezinganciphisa i-cholesterol futhi zisuse okweqile emzimbeni.
Ngakho-ke esinye salezi zitshalo sikagalikhi. Kwanele ukusebenzisa ama-clove ama-2-3 kagalikhi ngosuku, futhi ukuhlaziya kuzoba okujwayelekile. Ungapheka futhi ama-infusions ahlukahlukene kusuka ku -galikhi ngokuhlanganiswa nelamula, isibonelo, noju. Ukuze wenze lokhu, usonge amagremu angama-200 egalikhi ehlutshiwe kwi-grinder yenyama, engeza izipuni ezimbili uju kuyo bese ucindezela ujusi welamula owodwa. Hlanganisa konke lokhu, vala ngokuqinile futhi esiqandisini. Thatha isipuni ngosuku.
IHawthorn inomphumela omuhle. Kusukela ezikhathini zasendulo, izikhonkwane zayo zotshwala bezisetshenziselwa ukukhuthaza impilo.
Ungalungiselela ngokuzimela i-tincture ngokuxhuma isigamu sengilazi yezithelo ezisikiwe kanye ne-100 ml yotshwala. Le ngxube kumele ifakwe amasonto amathathu, endaweni emnyama, ivuse ngezikhathi ezithile. Ungaphinda ugcizelele izimbali ze-hawthorn. Brew hawthorn eyomile ngamanzi abilayo.
Ibhali elihlume, i-rye bran, ne-walnut nakho kuhle. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwetiye eliluhlaza kuthinta izinga le-cholesterol egazini, ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-tannin.
Uma i-atherosclerosis isivele yathuthukile noma ukwelashwa kungasebenzi kwezinye izindlela, kuyadingeka ukuba usebenzise izindlela zokwelapha.
Kusetshenziswa muphi umuthi:
Ama-Statins (Vasilip, Torvacard) yizo izidakamizwa ezivame kakhulu nezisebenzayo. Ukwelashwa kwe-Statin yinde, futhi ezigulini ezine-atherossteosis njalo.
Ama-fibrate (Gemfibrozil, Tricor) - avame ukusetshenziswa kakhulu ngezinga eliphakeme lama-triglycerides. Uyakwazi ukukhulisa okuqukethwe kwe-HDL.
Ama-sequence we-Bile acid, ama-inhibitors we-cholesterol awasebenzi kahle futhi awasetshenziswa kakhulu.
Ukwelapha isifo kunzima kakhulu futhi kubiza kakhulu kunokukuvikela. Ngakho-ke nakekela impilo yakho, yidla kahle nokuzivocavoca kanti izivivinyo zakho zizojwayelekile iminyaka eminingi.
Kuthiwani uma i-cholesterol 9 nangaphezulu?
Yini okufanele uyenze uma i-cholesterol ingama-9 mmol / l nangaphezulu? Ingancishiswa kanjani futhi ingafakwa ini ekuhlushweni okuphezulu kwayo? Kukholelwa ukuthi uma likhuphuka izinga laso, maningi amathuba okuthola i-atherosclerosis noma izinkinga zalo ngendlela ye-myocardial infarction.
Uma i-cholesterol idlula okwejwayelekile, lokhu kungaholela emiphumeleni emibi. Ngenxa yalokho, lapho izimpawu zokuqala ziqala ukuvela, isiguli asazi ukuthi senzeni futhi silwa kuphela nezimpawu ezivezile, singanaki impande yesifo uqobo. Ngakho-ke, ukuze lesi sifo singamthinti umuntu ngokumangala, kufanele aqale ukukhathazeka ngempilo yakhe kusukela ekuqaleni, alungisa indlela adla ngayo. Lokhu kungenziwa ngokuzimela noma uchwepheshe.
Yisiphi inkomba ye-cholesterol elingana nesilinganiso?
Ukuqoqwa kwento eseplasma yegazi, elingana nomaki ovunyelwe, kungaqala kusuka ku-3,6 kuye ku-7.8 mmol / L. Kodwa-ke, ochwepheshe base-UK bayaqiniseka ukuthi konke ukuba khona kwe-cholesterol "embi", edlula umkhawulo we-6 mmol / l, kungavusa ingozi yesifo se-atherosclerotic. Ngakho-ke, baluleka ukuthi balondoloze emzimbeni wabo inani lale nto, lingadluli ku-5 mmol / l.
Okulandelayo uhlu lwamazinga e-cholesterol kanye nezimpawu odokotela abazisebenzisayo ukuwahlukanisa nge-mmol / L (millimol / litre) kanye mg / dL (milligram / deciliter):
kunconyiwe - okungenani i-200 mg / dl,
ubuso obukhulu - ukusuka ku-200 kuye ku-239 mg / dl,
ephezulu - ngaphezulu kwe-240 mg / dl,
ukuhlangana okujwayelekile kungaphansi kuka-5 mmol / l,
kukhuphuke kancane - inani eliphakathi kuka-5 no-6.4 mmol / l,
isilinganiso esikhuphukile - phakathi kuka-6.5 no-7.8 mmol / l,
Izinga elibucayi - lidlula 7.8 mmol / l.
Ingozi nezimpawu ze-cholesterol ephezulu
Uma uvumela ukwanda kwe-cholesterol, lokhu kungakhipha imiphumela emibi ehlukahlukene.
Ukuqoqwa okuphezulu kwalokhu kungavusa lezi zinto ezilandelayo:
I-Atherossteosis iyi-blockage noma i-patency yokhubazeka yenethiwekhi ye-arterial emzimbeni.
Amathuba okulimazeka kwezifo zenhliziyo akhuphuka - ukukhubazeka kwempi, okuphazamisa ukulethwa kwe-plasma yegazi nomoya-mpilo emsipha oyinhloko.
I-Myocardial infarction - kwenzeka ngenxa yomoya-mpilo noma indlala yegazi lomsipha oyinhloko womuntu. Imvamisa, ama-plugus we-thrombus emithanjeni ye-coronary ekuvimbela lokhu. Lokhu kuholela ekufeni kwesitho.
Imivimbo kanye nemivimbo emincane - kuvela ngenxa yokuvalwa kwejazi legazi emthanjeni noma emthanjeni, ukuvimbela ukuhamba kwegazi endaweni yobuchopho bomuntu. Kwenzeka futhi lapho imithambo yegazi yesistimu yokujikeleza emzimbeni ihlukana, emva kwalokho amangqamuzana obuchopho afa.
Lapho inkomba ye-cholesterol idlula evunyelwe, ubungozi bokuqalwa kwe-IHD banda kakhulu.
Azikho izimpawu ezithile ezibonisa ukwanda kwezinga lezinto ezinikezwe emzimbeni womuntu. Uchwepheshe noma isiguli asikwazi ukubona lesi simo phezu kwe-palpation noma ukubona noma yiluphi ushintsho olukhombisa inkinga. Izimpawu ziqala ukwenzeka lapho umuntu eba ne-atherosulinosis. Yilesi sifo esidalwa njengomphumela we-cholesterol ephezulu ye-plasma.
Izimpawu zalesi sifo zibandakanya:
ukuncishiswa kwemithambo yenhliziyo yomsipha wenhliziyo,
Ubuhlungu emaphethelweni aphansi ngemuva kokuzivocavoca ngokomzimba okubangelwa yimithambo emincane,
ukwakheka kwezihibe zegazi nokuqhekeka kwemithambo yegazi, okungaholela kwimivimbo emincane noma ekushayweni,
Ukubhujiswa kwama-plaque - kungadala i-corombary thrombosis. Ngomonakalo omkhulu enhliziyweni, amandla ayo okusebenza angalimaza futhi kwehluleke okukhulu inhliziyo,
ukuthuthukiswa kwe-xanthoma - imibala yesikhumba ngamabala aphuzi, ikakhulukazi endaweni ezungeze izitho zombono. Ziyavela ngenxa yokubekwa kwe-cholesterol ku-plasma yegazi. Lolu phawu luvame ukubonwa ezigulini ezinesiphetho sofuzo sokuthola i-cholesterol susceptibility.
Ungawehlisa kanjani i-cholesterol?
Ukwehlisa ukusebenza kwawo, ukwenqaba ukudla ngokuqukethwe okuphezulu kwe-cholesterol "embi" akwanele. Kuyadingeka futhi ukusungula ukudla okuvamile, kugxile emikhiqizweni enamafutha angama-monounsaturated nama-omega-polyunsaturated fatty acids, kanye ne-fiber ne-pectin, ukuze kuthuthukiswe ukwakheka kwe-cholesterol "enhle" futhi kuqiniswe umphumela wokukhishwa ngokweqile "okubi".
Imikhiqizo ongathola kuyo into "ewusizo" futhi unciphise inani "elibi":
Izinhlobonhlobo zezinhlanzi zasemanzini ezinamaphesenti aphezulu kokuqukethwe kwamafutha njenge-tuna noma i-herring. Ukusungula ukukhiqizwa kwento yemvelo, kwanele ukusebenzisa i-100 g yezinhlanzi izikhathi ezi-2 ngeviki ukuze kulondolozwe isimo segazi kwifomu elihlanjululwe. Lokhu kuzovimbela ukwakheka kwezigaxa zegazi futhi, ngenxa yalokho, kunciphisa amathuba okukhula kwe-atherosclerosis.
Amantongomane ekuboneni kokuqala angumkhiqizo onamafutha amaningi, kepha amafutha atholwe kulesi sithelo aphethwe kakhulu yi-monounsaturated, okusho ukuthi anenzuzo emzimbeni womuntu. Ochwepheshe batusa ukudla okungenani ama-30 g amantongomane amahlandla ama-5 ngesonto. Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa lonke uhla lwalo mkhiqizo, futhi uhlangane nangembewu yesameji, imbewu yelanga kanye nefilakisi.
Kuzo zonke izinhlobo zama-oyela zemifino, kungcono ukunikela ngokuthandwa i-soybean, i-linseed, olive ne-sesame based. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuthosa kubo akunconyiwe, kodwa kufanele kufakwe kokudla okwenziwe ngomumo. Ukuze ususe i-cholesterol "embi" emzimbeni futhi uvikele ukunqwabelana kwayo, ungadla neminqumo yama-olivi nemikhiqizo ye-soy. Kodwa ngaphambi kokuthenga, kutusa ukunaka ukupakishwa kwangaphandle ukuze kungeyona ingxenye ye-GMO.
Ake sixoxe ngokuthi ungayelapha kanjani i-cholesterol ephezulu
I-cholesterol yindawo eyenziwe nge-lipid eyenziwe esibindini futhi ijikeleza egazini okudingekayo ukuze umzimba womuntu wakhe wonke ama-membrane amaseli, uhlanganise ama-steroid e-hormone ne-bile. Le nto ebalulekile ngamanani amaningi iba isitha semithambo yegazi futhi ibangele ukufa okuphezulu okuvela ekuhlaselweni yinhliziyo nokushaywa unhlangothi.
I-cholesterol yinto esetshenziselwa ukuzimela ekhiqizwa ngokuzimela ngumzimba. Kuphela yi-15-20% yayo engena egazini ngokudla, ngakho-ke izizathu zokukhuphuka kwe-cholesterol azihlali kuphela ekudla okungenamqondo kwabantu. Ukusolwa kwalesi simo yile:
ukuhlukunyezwa kwe-beta-blockers, diuretics, immunosuppressants,
ukubhema, umlutha wotshwala,
Izingozi ze-cholesterol ephezulu
kuma-protein-lipid complexes: HDL, LDL, VLDL (cholesterol ester) - 60-70%,
ngesimo samahhala - ama-30- 40% esamba.
Ukufingqa ukugxila kwe-2, eyodwa ithola izinga layo elijwayelekile. Izinkomba ezilandelayo ze-cholesterol esegazini zithathwa njengejwayelekile:
Iminyaka yobudala Imvelo (mmol / L)
70 nangaphezulu 3,73-7,25
Inkomba edlula isilinganiso sobudala ibhekwe ukuthi inyuswe. Iqembu eliyingozi kwezifo zohlelo lwezinhliziyo lubandakanya abesilisa abangaphezu kweminyaka engama-55 nabesifazane abangaphezu kweminyaka engama-65 abanamazinga e-cholesterol esegazini> 4.9 mmol / L.
Kungani ukukhuphuka kwezinga kuyingozi?
I-cholesterol “engaphezulu” ingafakwa odongeni lwangaphakathi lweziqu zemithambo yegazi nemithambo yegazi yenhliziyo, okuholele ekubonakaleni kwe-cholesterol plaque.
Zizwe ukhululekile ukubuza imibuzo yakho ku-hematologist wesikhathi esigcwele ngqo esizeni kumazwana aphawulayo. Nakanjani sizophendula. Buza umbuzo >>
I-plaque ingacishe ivimbe ngokuphelele i-lumen ye-coronary artery futhi iholele ku-angina pectoris kanye nokwehluleka kwenhliziyo okungapheli. Uma i-plaque igcwele i-cholesterol, iwa ngenxa yokuvuvukala noma ukweqisa kwemithambo bese ingena egazini, kuyokwenzeka i-myocardial infarction.
"I-cholesterol gruel" ye-plaque ebhubhisiwe ifihla imithambo yobuchopho futhi ibangele ukushaywa yi-ischemic.
Ubungozi bokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi Izinga le-cholesterol ephelele egazini (mmol / l)
Imithi ekwehlisa i-cholesterol yegazi ibizwa ngama-statins. Contraindication ekusebenziseni kwabo:
isigaba sokwanda kwe-hepatitis, ukuqina kwesibindi,
ukwanda kwesifo sezinso,
ukuphuza utshwala kanyekanye.
Igama lezidakamizwa Umthamo mg Umthamo omncane, mg Umthamo ojwayelekile, mg Umthamo omkhulu mg Intengo, hlikihla.
I-Simvastatin (Zokor, Vasilip, Simgal, Simvakard) 10, 20 10 20-40 40 60-300
ILovastatin (Mevacor, Holetar, Medostatin) 20, 40 20 40 40-60 Kusuka ku-500
I-Pravastatin (Lipostat) 10, 20, 40 10-20 40-80 60 Kusuka ku-700
I-Fluvastatin 20, 40 20 40 40-80 Kusuka ku-2000
I-Atorvastatin (Liprimar, Atoris, Tulip, Torvakard) 10, 20, 40, 80 10 10-20 40-80 130-600
Izincomo zokudla okunempilo kwabantu abane-cholesterol ephezulu egazini ihambelana netafula No. 10, 10C ngokusho kukaPevzner. Ukulungiswa kokudla kuyindlela ethembekile yokuqeda izimbangela zokudla okunempilo okwenyuka kwe-cholesterol yegazi.
Inani lamandla nsuku zonke akufanele lidlule i-2600 Kcal.
Okuqukethwe kwamaprotheni anconywayo yi-90 g (lapho ama-55-60% abelwe amaprotheni ezilwane).
Ukudla kwamafutha nsuku zonke akubikho ngaphezu kwama-80 g (okungewona ngaphezulu kwama-60% abelwe amaprotheni ezilwane).
Ama-carbohydrate - akukho ngaphezu kwama-350 g.
Inani lokudla ngosuku - 5-6.
Akukho ngaphezu kuka-5 mg kasawoti ngosuku.
Inani lamafutha ayingozi we-trans alikho ngaphezu kwe-1% yokudla okuphelele.
Ukudla kwansuku zonke kufanele kube nama-30-45 amagremu we-fiber yemifino, ama-200 g wemifino emisha, 200 g wezithelo ezintsha.
Ukusetshenziswa kwenhlanzi njalo ezinsukwini ezingama-2-3.
Akukho ngaphezu kwe-20 g yotshwala ngosuku kwabesilisa futhi akukho ngaphezu kwe-10 g kwabesifazane.
1 ibhulakufesi: Inkukhu ebilisiwe yenkukhu, amazambane abhakwe, imifino, isaladi elisha lamatamatisi, ukhukhamba, i-compote yezithelo eyomile noma itiye elibuthakathaka nelamula.
2 ibhulakufesi: i-oatmeal jelly, ibhanana, i-apula, isangweji yesibindi se-cod.
Isidlo sasemini: ikhekhe le-casserole noma isobho lemifino enamafutha aphansi, ucezu lwenyama ebunjiwe, i-apula, ibhanana noma i-orange, umhluzi we-rosehip.
Ukudla isidlo sakusihlwa: isitshulu semifino ethosiwe, ujusi we-sea sihlahla sivame ukutholakala, ikhukhamba, utamatisi noma eliphakathi kwebala
Ukudla Kuvunyelwe Ukudla
Imifino, isobho lezithelo,
isinkwa sikabani, i-bran
unogwaja obilisiwe noma oshonile, inyama yenkomo, inkukhu,
ukudla kwasolwandle okunamafutha abilisiwe noma abhakwe ngobuncane besawoti nezinongo,
i-cottage casseroles yezithelo zasekhishini,
iphalishi nesitsha sokudla se-semolina, i-buckwheat, oatmeal,
imifino emisha, ephekiwe, ebilisiwe, ebhakiwe,
inani elincanyana lamantongomane, uju,
amasaladi wemifino angachaziwe,
amajikijolo, iziphuzo zezithelo, i-jelly, izithelo ezidliwayo, ama-decoction we-herbal.
Ukudla Okunganconyelwayo Imikhiqizo
Kufakwe uwoyela, izitsha zokubhema,
inyama enamafutha, inkukhu nenhlanzi, isaladi,
ikhekhe, pasta, isinkwa esimhlophe, ilayisi,
usodas omnandi, ushokoledi,
ikofi elinamandla, itiye, ukhukhunathi,
imikhiqizo yobisi enamafutha, kufaka phakathi ushizi,
imikhiqizo enokuqukethwe okuphezulu kwezivikelo, ukunambitheka, izengezo zokufakelwa, izithuthukisi ze-flavour.
Manje ake sixoxe ngokuthi ungayelapha kanjani i-cholesterol ephezulu ngamakhambi abantu. Khumbula ukuthi ukwelashwa ngamakhambi esintu akumele kuqeqe imishanguzo futhi kuvimbele ukusetshenziswa kwama-statin.
Faka amaconsi angama-20 we-propolis tincture engilazini yamanzi. Thatha amanzi we-propolis kathathu ngosuku ngaphambi kokudla.
Fafaza izimpande ze-ginger ku-isipikili segalikhi, engeza amaconsi ama-3-5 wejusi etiyeni. Ungaphuza ujusi we-ginger izimpande ekuseni nakusihlwa.
Brew itiye le-ginger usebenzisa amathisipuni ama-2 we-ginger root shavings, engeza izingcezu ezimbalwa zikalamula kuyi-teapot.
Ngendlela efanayo itiye lezimbali ezingama-linden liyenziwa (izipuni ezi-2 zezimbali ezomisiwe ngelitha lamanzi). Itiye elinjalo lihle ekuseni, ekudleni kwasemini nakusihlwa. Ungahlakaza u-1-2 g wempova yezinyosi ngokuphuza itiye.
Lungisa uwoyela uqobo, lapho uzodinga khona amabhawuni ayi-10 kagalikhi ezinkomweni ezi-2 ze-olive yamafutha. Cwilisa ujusi kusuka ku -galikhi bese uyixube ne-oyile, uyiyeke. Sebenzisa ukugqoka amasaladi.
Lungiselela ukumnika ku dill. Thatha inkomishi eyi-1/2 ye-dill entsha, isipuni sempande ye-valerian yomhlabathi. Thela amanzi abilayo bese upheka imizuzu engama-20. Akuyeke kube ngezinsuku ezimbalwa, uhlobo. Phuza ukumnika ngaphambi kokudla ngakunye ngesipuni soju.
Thela izipuni ezi-2 ze-bee subpestilence epanini, uthele ingilazi yamanzi abilayo bese imizuzu engu-2 ngaphezulu kokushisa okuphansi. Bayeke baphuze futhi bapholile. Hlunga ukumnika ngaphambi kokusebenzisa. Phuza izikhathi ezi-3 ngosuku ngaphambi kokudla.
Amakhambi e-Folk alungele kakhulu ukuvimbela ukwakheka kwe-cholesterol plaque.
Susa ukungasebenzi ngokomzimba njengesizathu sokubuthakathaka kwe-vascular and myocardial.
Ukuzivocavoca umzimba akufanele kuvuse ukonakala enhlalakahleni yakho. Izindlela ezisebenzayo kakhulu ukusebenza komzimba okulinganiselayo. Zenzelwe ukuqinisa udonga lwe-vascular kanye nemisipha yenhliziyo futhi zifaka:
Ukuhamba noma ukuhamba nge-Nordic emoyeni omusha,
Ukusebenza okulula ngesivinini esilinganiselwe
ukuzivocavoca kwasekuseni (squats, miguu swing, gxuma khona lapho),
ukuzivumelanisa nezimo nokuzelula,
amandla okuzivocavoca ngama-dumbbells,
i-aerobics noma ukubhukuda.
Mayelana ne-cholesterol ephezulu nezenzo kulokhu
Ungaxhumana ne-GP yakho yangasekhaya ukuthola ukuhlolwa kwegazi nge-biochemical. Uchwepheshe wezokwelapha uzokhetha imishanguzo, futhi, uma kunesidingo, akudlulisele kudokotela wezinhliziyo, ozokhetha le mithi ngokuya ngesimo sohlelo lwakho lwezinhliziyo, imbangela yalesi sifo, izinga le-cholesterol, iminyaka, isisindo somzimba nezifo ezihambisana naso.
Futhi ekuphetheni - ungakwehlisa kanjani i-cholesterol ngaphandle kwezidakamizwa
Ukuhlola ukuhlolwa kwe-cholesterol. I-cholesterol engalungile futhi enhle
Wonke umuntu uzwe ukuthi nge-cholesterol ephezulu, ingozi yokuba nesifo senhliziyo nayo iyanda. Kepha iyiphi cholesterol ebhekwa njengephakeme? Akunzima ukudlulisela ukuhlaziywa kwe-cholesterol - kodwa, kuvela ukuthi, hhayi wonke udokotela onganquma kahle izinga le-cholesterol kulo. Uma wena noma obathandayo nikhathazekile nge-cholesterol “embi”, udokotela wenhliziyo u-Anton Rodionov uzokusiza uqonde izinkambiso ze-cholesterol.
Ufuna ukwenza imali? Nginikeza umbono omuhle. Yenza ukubheja (ngemali encane ukuze kungakhubeki muntu) ukuthi i-cholesterol ingotshwala. Umsizi wakho, vele, akakholelwa kuwe futhi ukulungele ukuxabana. Vula noma yisiphi isithenjwa esingathi sína. Futhi enjabulweni yakho enkulu, qiniseka ngokulunga kwami ​​(futhi manje sekungokwakho). Ukuwina kwakho.
I-Cholesterol yahlukaniswa ukuphela kwekhulu le-XVIII, ithole igama layo kumagama amabili: "ikholera" - i-bile ne "sterol" - ngesibindi. Futhi phakathi nekhulu le-XIX, osokhemisi baveza ukuthi ngesakhiwo sawo samakhemikhali siso isigaba sesigaba se-alcohols. Ngakho-ke, kwamanye amazwe ibizwa nge- "cholesterol." Uyakhumbula usuka chemistry yesikole ukuthi wonke ama-alcohols aphela ku- "ol": ethanol, methanol, njll.
Amanye ama-laboratories asebenzisa okubhalwa ngolimi lwesiNgisi - cholesterol. I-cholesterol ne-cholesterol kungukuvumelanisa.
I-cholesterol ephezulu: kungani mina?
I-cholesterol ayifani ngokuphelele nalezi ziphuzo ezidala ukudakwa nokudakwa, noma kunjalo, ukweqisa kwazo akusizi ngalutho emzimbeni. Kodwa-ke, futhi akunakwenzeka ukuba uphile ngaphandle kwe-cholesterol. I-Cholesterol iyinto yokwakha udonga lweseli, iyisandulelo sawo wonke ama-hormone e-steroid (cortisol, aldosterone, mahomoni ocansi).
Kunenkolelo esabalele yokuthi abantu abadla ukudla okunamafutha amaningi kuphela bane-cholesterol ephezulu. Lutho lolohlobo. Ama-80% cholesterol akhiqizwa emzimbeni (esibindini, kwamanye izicubu) futhi ngama-20% kuphela cholesterol aqhamuka ekudleni. Kepha inani le-cholesterol ekhiqizwa ngumzimba lincike. kwesokudla, kusuka kwinzalo.
Ngenxa yalokho, indoda ezimila ngokuphelele, imifino eqinisekile ebona inyama kuphela esithombeni, ingaba ne-cholesterol ephezulu. Inombolo yesibili: uma isihlobo sakho sine-cholesterol ephezulu, lapho-ke udinga ukuyilawula kaningi. Ekugcineni, i-corollary iyinombolo yesithathu: kuvame ukwenzeka ukunciphisa i-cholesterol ephezulu ngokudla kuphela.
Njengoba wazi, uphethiloli awushisi uwedwa. Ukuze iqhume, udinga inhlansi. Ngendlela efanayo, i-cholesterol ngokwayo ayinamathele emikhunjini enempilo ngokuphelele. Ukuze ukubekwa kwayo emikhunjini kuqale, kunohlobo oluthile “lomdlalo” oludingekayo. Ezinye izinto ezisengozini ziba ngumdlalo onjengalo: ukubhema, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, ngokweqile, okungukuthi, yonke into elimaza imithambo yegazi ngokwayo, ibenze babe sengozini enkulu ekuthuthukisweni kwe-atherossteosis.
Maye, abantu abaningi baphatha imidlalo efana nale. Kungakho, ngendlela, kaningi i-atherosulinosis ikhula kubantu abane-cholesterol ephansi - uphethiloli omncane, kanye nebhokisi lonke lemidlalo.
I-cholesterol ingu-80% eyenziwe umzimba kanti u-20% kuphela ovela ekudleni.
Ukubhema, umfutho wegazi ophakeme, isifo sikashukela i-mellitus, ukukhuluphala kukhuthaza ukukhula kwe-atherossteosis ngisho nangamazinga ejwayelekile e-cholesterol.
Isici sobungozi esibaluleke kakhulu kwezinkinga yi-cholesterol “embi” (LDL).
Izinkomba ze-cholesterol ephelele ne-LDL azinawo umkhawulo ophansi ojwayelekile. Okuncane, okungcono.
Amafutha emifino, empeleni, awakwazi ukuqukethe i-cholesterol.
Kunzima ukunciphisa i-cholesterol kuphela ngokushintsha indlela odla ngayo.
I-Cholesterol: kubi futhi kulungile. Uyini umehluko?
Wonke umuntu uzwe nge-cholesterol "enhle" ne "embi". Iqiniso ngukuthi i-cholesterol ngokwayo iyimolekyuli engancibiliki futhi ayikwazi ukungena ezicutshini. Udinga "ukuthutha" okhethekile. Endimeni yokuthi "amakhabethe" we-cholesterol angamaprotheni akhethekile othwala. Ngaphezu kwalokho, phakathi kwazo kukhona lezo "eziletha" i-cholesterol ezicutshini, lapho izofakwa khona, inomthelela ekuthuthukisweni kwe-atherosclerosis, futhi kunamaprotheni akhishwa yi-cholesterol emzimbeni.
Ngolimi lwezokwelapha, kubizwa i-cholesterol “embi” "I-lipoproteins ephansi" (LDL, LDL, LDL). Yile nkomba esizoyibheka ekuhlolweni kwegazi le-biochemical ukuze sinqume ukuthi lingakanani ubungozi. "Kuhle" cholesterol kuyinto "Ama-lipoproteins aphezulu aphezulu" (HDL, HDL, HDL). Lapho iphakama kakhulu, iba ngcono i-cholesterol emzimbeni.
Lapho i-cholesterol ifakwa odongeni lomkhumbi, kuqalwa ukwakheka kwe-atherosulinotic. Iyakhula, iqale ukunciphisa umkhumbi. Ngenkathi ukunqunyelwa kungama-20-30%, umuntu akezwa lutho. Lapho imboza i-lumen ngo-50-60%, ama-40% asele akwanele ukuphuthelwa inani elifanele legazi, kukhula ischemia. I-Ischemia yenhliziyo ibizwa ngokuthi "i-angina pectoris" - inhliziyo idinga igazi eliningi, futhi isitsha esinqunyiwe (esenziwe stenosed) asikwazi ukusinika.
Uma i-plaque isikhululekile, ibuthaka, ifuthe, ingadilika, kuqhume. Umzimba ubona ukulimala kwe-plaque njengokulimala, futhi ama-platelet - amaseli egazi abhekene nokunqanda ukopha - woza esizeni somonakalo. Ifomu legazi emzimbeni esitsheni, okusho ukuthi ukuphuma kwegazi kungazelele futhi kuyingxenye yezicubu zenhliziyo, ubuchopho, noma esinye isitho kushiywa ngaphandle kwegazi futhi kufe.
Le nqubo ibizwa ngokuthi "ukushaya kwenhliziyo." Uma kwenzeka inhlekelele enhliziyweni, kuwukufiphala kwe-myocardial, ebuchosheni - isifo sohlangothi, emthanjeni womlenze - i-gangrene.
I-cholesterol level 20 mmol / L, kusho ukuthini?
I-cholesterol ingelesigaba sama-lipid acid. Lesi yingxenye ye-waxy ekhona egazini lomuntu. Cishe i-80% yakheka izitho zangaphakathi, okusele kungenwa ngokudla.
I-cholesterol akuyona into embi, ngoba ibuyisela ulwelwesi lweseli, ibamba iqhaza ekwenziweni kukavithamini D - into iyadingeka ekutholeni i-calcium ngokuphelele. Akunangozi lapho i-HDL iphakeme kune-LDL.
I-cholesterol embi ayikwazi ukudilizwa, ngenxa yalokho inamathela ezindongeni ze-vascular, ngenxa yalokho kwakhiwa ama-atherosclerotic plaques. Amadiphozithi omzimba aphazamisa ukungena kwegazi, okuholela ekuqhekekeni kwemithambo yegazi.
Isimo se-OH amayunithi angama-3-5.4. Esimweni lapho ukuhlolwa kwelabhoratri kunikeza umphumela ongafika ku-7.8 mmol / L, izindlela zokuxilonga ziyadingeka ukuthola izimbangela eziholela ekwandeni kwezinga lekholesterol. Inkomba engenhla kwe-7.8 mmol / L idinga ukwelashwa, ukudla kanye nemidlalo. Ngakho-ke, inani lamayunithi angama-20 likhulu futhi liyingozi.
Kuleli zinga, umuntu onesifo sikashukela ukhulisa amathuba okuba nezifo ezilandelayo kanye nezimo ze-pathological izikhathi eziningana:
Ukuhlaselwa yisifo senhliziyo noma ischemic / hemorrhagic stroke,
Izinkinga ngamaphethelo aphansi ngenxa yokufakwa emikhunjini yemilenze,
Ukulahleka kwenkumbulo okuyingxenye
Ukwakheka kweziqeshana zegazi.
Nge-cholesterol yamayunithi angama-20, kungaqhuma i-aortic, okuthi kuzo 90% wezithombe zomtholampilo ziholele ekufeni.
Ngakho-ke, uma i-cholesterol ingama-20, yini okufanele ngiyenze? Ngokwenyuka kwe-cholesterol, kuyadingeka ukuthi uphinde uhlaziye ukuthi yini ongayiphikisa noma uyiqinisekise imiphumela yokuqala. Ngokusekelwe ezifundweni ezimbili, udokotela uncoma ukwelashwa ngezidakamizwa.
Imvamisa, izidakamizwa ezivela eqenjini lama-statin zinqunywe. Umphumela wazo ubangelwa ukucindezela ukwakhiwa kwe-cholesterol, ngenxa yalokho izinga le-LDL lincishisiwe.
Kodwa zingaphazamisa izinqubo ze-metabolic, kuholele ekwehlekeni okukhulu kwe-glucose kuma-diabetes, ngakho-ke izidakamizwa ezikhethiweyo zesifo sikashukela.
Izimo azikaze zinikezwe ukwanda kwe-pathologies yesibindi, i-myopathy, ngesikhathi sokukhulelwa, ukuncelisa kanye nokubekezelela umuntu ngamunye. Imiphumela emibi ejwayelekile ibandakanya ukuphathwa ikhanda, ukuphazamiseka komgudu wokugaya ukudla, izinkinga zezinso, kanye nokungezwani komzimba.
Nge-hypercholesterolemia, kunconywa amaphilisi alandelayo (ama-statins):
Ngokuphikisana nesizinda sokungafaneleki kokusebenzisa ama-statins, amaphilisi ebandla le-fibrate anqunyelwe. Usizo lwabo ukuthi aluholeli ezinkingeni zabanesifo sikashukela. Kwezinye izimo, ama-statins nama-fibrate ahlanganisiwe, kepha lokhu kuyiphutha. Imithi ihlanganisiwe. Contraindication ifaka ukwahluleka kwesibindi nezinso, ukuvuvukala kwisinye senyongo, i-cirrhosis, ukukhulelwa.
I-Gemfibrozil - umuthi wehlisa inani lama-triglycerides, wehlisa ukwenziwa kwe-LDL, usheshisa ukuqeda i-cholesterol egazini,
I-Bezafibrat yisidakamizwa esisiza ukwenza ngokwejwayelekile iphrofayili ye-cholesterol. Yabela ngemuva kwesifo sikashukela, i-angina pectoris, isifo senhliziyo.
Ngokuncipha kwemithambo yegazi, i-sedidation sedimentation esebenzayo ezindongeni iyabonakala, ngakho-ke, i-nicotinic acid enesakhiwo se-vasodilating ifakiwe ohlelweni lokwelashwa. Umthamo ukhethiwe ngamunye, uhlukahluka kusuka ku-50 kuye ku-100 mg izikhathi ezi-2 ngosuku, inkambo yokwelashwa iyizinsuku eziyi-14. Ukwelashwa isikhathi eside nge-nicotinic acid kwandisa ingozi yokukhuluphala kwesibindi ezigulini.
Ukwehlisa ukumunwa kwe-cholesterol emathunjini, kunconywa i-Ezetrol, umuthi omusha omusha. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi umuthi awukhubeki ukuphazamiseka kokugaya ukudla, ukungasebenzi kahle kwendlela yokugaya ukudla. Umthamo ngosuku ngu-10 mg.
Isikhathi sokwamukelwa sinqunywa ngawodwana, ukuqapha okungapheli kweleveli ye-cholesterol kuyadingeka.
Amakhambi we-homeopathic we-cholesterol
Uma i-cholesterol ingaphezulu kwama-20 amayunithi, kusetshenziswa imishanguzo ye-homeopathic. Usizo lwabo ukuthi abalimazi umzimba ngesifo sikashukela, bangaholeli ekwakhiweni komphumela onobuthi.
IHolvacor umuthi we-homeopathic osiza ukwenza ngokwezifiso umzimba we-metabolism. Okuvame ukusetshenziswa ekwelapheni ukuphazamiseka kwe-metabolic. Inkambo yokwelashwa iholela ekujuleni kwenqubo ye-lipid, yehlise umfutho wegazi. Ngesifo sikashukela, i-glucose iyancipha, ethuthukisa inhlala-kahle kanye nenkambo yesifo esingamahlalakhona.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukwelashwa kweHolvacor? Isikhathi sokwelashwa sinqunywa ngawodwana. Ukuqashelwa kunqunyelwe ukusebenza kwesibindi. Ukuqanjwa kuqukethe umthamo omncane wezithako ezisebenzayo, ngakho-ke ithuluzi akuvamile ukuthi liholele ekuthuthukiseni imiphumela emibi.
Nge-hypercholesterolemia, abanesifo sikashukela bayanconywa ngemithi enjalo ye-homeopathic:
I-cholesterolum yisidakamizwa esingokwemvelo esisiza ukulawula umzimba wamafutha emzimbeni. Ukwemukelwa kunomthelela omuhle esimweni senhliziyo nemithambo yegazi. Ithuluzi lisiza ukuncibilikisa ama-atherosulinotic plaque, ehlisa umfutho wegazi. Ungathenga ekhemisi, intengo ngama-ruble ayi-120-150.
I-Pulsatilla iyikhambi elisiza ukubuyisela ukusebenza kwesistimu ye-vascular. Kunconywa ukuthatha engcupheni enkulu ye-atherossteosis, okubangelwa ukwanda kwe-cholesterol.
Umphumela wemithi ye-homeopathic uhlukile kumphumela wezidakamizwa zokwenziwa, ngoba i-homeopathy isiza ukuqeda imbangela ye-hypercholesterolemia. I-cholesterolum neHolvacor bayayekisa izimpawu eziyingozi ze-atherosulinosis, basize ukubuyisela umzimba ezingeni lamaselula.
Inani le-cholesterol lika-20 mmol / L inani elisongela impilo yesifo sikashukela mellitus. Ukwenza ngokwejwayelekile amazinga e-cholesterol, akwanele ukuthatha ama-statins noma ama-fibrate, noma ukwelashwa nge-homeopathy. Kuyadingeka ukwenza ngendlela ephelele - thatha izidakamizwa ezokwehlisa i-lipid futhi uphile impilo enempilo.
Ungayelapha kanjani i-atherosclerosis echazwe kule vidiyo kule ndatshana.
Ukuhlaziywa kwe-Cholesterol: I-Lipid Spectrum
Ukuze unqume ukushintshwa kwe-cholesterol futhi uhlole inani le-cholesterol "enhle" ne "embi", kwenziwa igazi, elibizwa ngokuthi i-lipid spectrum (Iphrofayili ye-lipid, iphrofayili ye-lipid). Kufaka:
I-cholesterol ye-LDL (“kubi”)
I-cholesterol ye-HDL ("kuhle")
Triglycerides - Lokhu kungenye inkomba yokudla kwamafutha, okungenye yemithombo esemqoka yamandla kubantu. Kukholelwa ukuthi ukukhulisa i-triglycerides akuyona ingozi ngokwezinto eziphathelene nengozi yenhliziyo nokukhulisa i-cholesterol. Ama-triglycerides aphezulu ngokuyinhloko ayizici eziyingozi ze-pancreatitis.
Ngokungafani ne-cholesterol, ama-triglycerides cishe awakhiqizwa emzimbeni, kodwa ikakhulukazi avela ekudleni. Ngakho-ke, ngesinye isikhathi ngiyakholelwa ukuthi isiguli esine-cholesterol ephezulu silandela ngempela lokho kudla okunconyiwe, kepha uma iphakamisile i-triglycerides, kusho ukuthi udla amafutha wezilwane kakhulu kunesidingo.
Izinhlobo ze-cholesterol: itafula. Ukuhlaziywa kwe-cholesterol ukuhlaziywa
Ngakho-ke, sathola imiphumela yokuhlolwa kwegazi kwe-lipids. Into elandelayo okudingeka siyenze ukukhipha ikholomu “ejwayelekile” kulokhu kuhlaziya. Yebo, yebo, ungamangali. Unembile. Akukho labhoratri ezweni elaziyo i-cholesterol. Le nkomba ihlala ibuyekezwa ngumphakathi wezokwelapha wembulunga yonke, kepha ngasizathu simbe lolu lwazi oluyimfihlo alufinyeleli ezindaweni zokucwaninga.
Okokuqala, masivume ukuthi kune-cholesterol ephezulu kuphela, kepha cholesterol ephansi ayenzeki. Akukho mkhawulo ophansi we-cholesterol. Ehlisa i-cholesterol, okungcono. Ukuqinisekisa izidingo ezibalulekile zomzimba (ukwakhiwa kwamaseli, i-hormone synthesis), i-cholesterol edingeka kancane nje, futhi azikho nezindlela zanamuhla zokwelapha ezinganciphisa i-cholesterol kangangokuba le misebenzi iyathinteka.
Ngemuva kokuba sesikhiphe (noma saphuthelwa) "okujwayelekile" kwifomu, ake sibeke lapho lokho okucatshangelwa namuhla amanani egazi we-lipid.
I-cholesterol ephelele engu-1.0 mmol / L yabesilisa kanye> ne-1,2 mmol / L yabesifazane
I-Triglycerides 5, kepha ≤10) 10, isifo senhliziyo, isifo sikashukela) I-5.0 mmol / L
1% kuye ku-5% kuya ku-10%, noma ubungozi obukhulu kakhulu Ukwenza ngcono indlela yokuphila, ukunquma izidakamizwa Ukuthuthuka Kwendlela Yokuphila Nokunikezwa Kweso Masinyane Ukuthuthuka Kwendlela Yokuphila Nokunikezwa Kweso Masinyane Ukuthuthuka Kwendlela Yokuphila Nokunikezwa Kwamanje Ukuthuthuka Kwendlela Yokuphila Nokunikezwa Kwamanje
Isigaba Sezingozi Eziphezulu kakhulu:
I-Myocardial infarction, ukuhlinzwa enhliziyweni nemithambo yegazi.
Izici eziningana zobungozi, lapho zivivinywa kusetshenziswa itafula le-SCORE, ubungozi bebonke buyi-> 10%.
Isigaba sobungozi obukhulu:
Isifo senhliziyo, isifo esibucayi se-carotid arteriossteosis, isifo sikashukela mellitus.
Izici eziningana zobungozi, lapho zihlolwa kusetshenziswa itafula le-SCORE, ubungozi bebonke bungama-5-9%.
Isigaba sengozi esilinganiselwe:
Izici eziningana zobungozi, lapho zivivinywa ngokuya ngetafula le-SCORE, ubungozi bungu-1%%.
Umlando womndeni wezifo zamathambo okuqala
Nabanesifo sikashukela ngalokho ongaphuza itiye
Ushokoledi omnyama wohlobo 2 sikashukela: izinzuzo nokulimaza
Invocana® (100 mg) iKaragliflozin
Ngingazidlela izindebe ezinesifo sikashukela?
I-Clover glucometer - hlola i-4209 ngaphandle kwezesekeli
Ungayiphatha kanjani i-pancreatic pancreatitis ekhaya
Ungayiphatha kanjani i-pancreatitis eyingozi ekhaya i-pancreatitis eyingozi yisifo esiyingozi kakhulu lapho ukuvuvukala okunamandla kwenzeka khona kumanyikwe, kuhambisana nokuzicwilisa kanye necrosis. ...
Izinga leglucose emadodeni
Yini okufanele uyikhethe: Reduxin noma Reduxin Light?
ImibuzoAma-sweetenersIzindlelaUkuxilongaIngcindeziIsifo Sikashukela: Ulwazi olubalulekileSizaUkudla ngesifo sikashukelaIzinhlobo NezinhloboIzizathu
I-Chocolate Win 72% Cocoa Sugar Free
I-gruff cuff yesifo sikashukela
Kungenzeka yini ukudla i-aspic enesifo sikashukela sohlobo 2?
I-Dufalac yesifo sikashukela sohlobo 1
Iresiphi yesobho elimnandi elinesithombe